မန်စီးတီးရဲ့ နိုင်ပွဲကို ရပ်တန့်ခဲ့တဲ့ ဘန်လေ - FOX Sports Myanmar
မန်စီးတီးရဲ့ နိုင်ပွဲကို ရပ်တန့်ခဲ့တဲ့ ဘန်လေ
ဘန်လေအသင်း နဲ့ မန်စီးတီးအသင်းတို့ ကစားခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ် မှာတော့ မန်စီးတီးအသင်းရဲ့ နိုင်ပွဲကို ဘန်လေအသင်းက သရေရလဒ်နဲ့ ရပ်တန့်ခဲ့ပါတယ်။
ဘန်လေ ၁ – ၁ မန်စီးတီး
မန်စီးတီးအသင်း နောက်ခံကစားသမား ဒန်နီလိုရဲ့ အဝေးကန်ချက်နဲ့ ဦးဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပွဲပြီးဆုံးဖို့ နီးကပ်ခဲ့တဲ့ အချိန်မှာ ဘန်လေအသင်းက မိုက်ကယ် လော်တွန်ရဲ့ ပေးပို့မှုကနေ ဂိုမတ်ဆန်က မြေမကျ ကန်သွင်းပြီး အသင်းတွက် ခြေပဂိုးသွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီပွဲစဉ် သရေရလဒ်ကြောင့် မန်စီးတီးအသင်း ဒီရာသီမှာ ၄ ကြိမ်မြောက် နိုင်ပွဲ ပျောက်ဆုံးတဲ့ ပွဲစဉ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ၉ ပွဲဆက် နိုင်ပွဲပျောက်ဆုံးနေခဲ့ ဘန်လေအသင်း နည်းပြ ရှောင်ဒိုက်အတွက် တော့ နိုင်ပွဲရရှိခဲ့ခြင်းမရှိပေမယ့် အသင်းပရိသတ်တွေ အတွက် အနည်းငယ် စိတ်ကျေနပ်စရာ ရလဒ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ် ဆိုရမှာပါ။
မန်စီးတီးအသင်းကတော့ ပွဲစဉ် ၂၆ ပွဲမှာ ၂၃ ပွဲမြောက် နိုင်ပွဲရယူပြီး အမှတ်ပေးဇယားကို ၁၈ မှတ်ဖြတ်ဦးဆောင်နိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။၂၀၀၀ ခုနှစ်က မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်း ၊ ၂၀၀၆ ခုနှစ်က ချဲလ်ဆီးအသင်းတို့ နောက်ပိုင်း အမှတ်ပေးဇယား ဒုတိယ နေရာက အသင်းကို ၁၈ မှတ်ဖြတ်နိုင်တဲ့ အသင်းဖြစ်ဖို့ မန်စီးတီးအသင်း ကြိုးစားပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။
ပွဲအစတည်းက တိုက်စစ်ဆင် ကစားခဲ့တာ မန်စီးတီးအသင်း ဖြစ်ခဲ့ပြီး ပွဲအစ ၃ မိနစ်မှာပဲ ပင်နယ်တီ ဧရိယာထဲ ကန်သွင်းမှု ဘန်လေ အသင်း ကစားသမားတွေနဲ့ ထိခဲ့တာကြောင့် ထောင့်ကန်ဘော ကန်ခွင့် ရရှိခဲ့ပြီး ကွန်ပနီ ခေါင်းတိုက် သွင်းယူ ခဲ့ရာမှာ ဂိုးသမား ပုပ် ဆီသာ ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။
၁၀ မိနစ် အကြာမှာ ဆမ်ဗုတ် တန်ပြန်တိုက်စစ်ဆင် ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် အော်တာမန်ဒီ ရှင်းထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်၃ မိနစ် အကြာမှာတော့ ဒီဘရိုင်းရဲ့ ကန်သွင်းချက်က နောက်ခံကစားသမားတွေနဲ့ ထိပြီး မန်စီးတီးအသင်း ထောင့်ကန်ဘောနဲ့သာ အဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီထောင့်ကန်ဘောကနေ ကွန်ပနီ နောက်တစ်ကြိမ် အခွင့်အရေးရရှိခဲ့ပြီး ၆ ကိုက်စည်းအတွင်းကနေ အနီးကပ် ခေါင်းတိုက်ခွင့် ရရှိခဲ့ပေမယ့် ဂိုးသမား ပုပ် နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်မံ ကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
၂၂ မိနစ်အရောက်မှာတော့ မန်စီးတီးအသင်း ဦးဆောင်ဂိုး ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီဂိုးကိုတော့ နောက်ခံကစားသမား ဒန်နီလို ဂိုးစည်းထိပ်ကနေ ဘန်လေအသင်း ဂိုးပေါက် ရဲ့ ညာဘက်ထောင့်ကို ကန်သွင်းခဲ့ပြီး အသင်းတွက် ဦးဆောင်ဂိုး ရယူပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
A tough point on the road.
16 points clear at the top.#mancity pic.twitter.com/4u3TlZ0q2d
နောက်ထပ် ဦးဆောင်ဂိုး ရရှိအောင် ဖိကစားခဲ့တဲ့ မန်စီးတီးအသင်း ၂ မိနစ်အကြာမှာ အဂူရို ဂိုးစည်းထဲ ကန်သွင်းခွင်ခဲ့ပေမယ့် ဘန်လေ အသင်း နောက်တန်း ကစား ၄ ဦးလုံး စုစည်း ဖြတ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ မိနစ် ၃၀ နား ရောက်ရှိချိန်မှာ စတာလင် ကန်သွင်းချက်ကိုလည်း ဘန်လေအသင်း ဂိုးသမား ကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဘန်လေအသင်းလည်း အပိုင်အခွင့်အရေး တစ်ကြိမ်ရရှိခဲ့ပြီး ဘန်မီးရဲ့ မန်စီးတီး ဂိုး စည်းထဲ့ ကန်သွင်းချက်ကို ဂိုးသမား အီဒါဆန် ကာကွယ်ခဲ့ပါတယ်။
ပထမပိုင်းပြီးဆုံး ဖို့ ၅ မိနစ်အလိုမှာတော့ ဒီဘရိုင်းရဲ့ ဂိုးဧရိယာ ထိပ်က ကန်သွင်းချက်ကို ဘန်လေဂိုးသမား နစ်ပုပ် ပုတ်ထုတ်ခဲ့ပြီး ပြန်ထွက်ခဲ့တဲ့ ဘောလုံးကို အဂူရို အနီကပ် ခေါင်းတိုက်ခဲ့ပေမယ့် နစ်ပုပ်ပဲ နှစ်ကြိမ်ဆက် ကာကွယ်ခဲ့ပါတယ်။
ပထမပိုင်း နောက်ဆုံး မိနစ်မှာ ၂ သင်းလုံး တစ်ကြိမ်စီ အခွင့်အရေးရရှိခဲ့ပြီး ဂိုးသမား တွေ ကာကွယ်နိုင်ခဲ့တာကြောင့် ပထမပိုင်းကိုတော့ မန်စီးတီးအသင်း ဦးဆောင်ပြီး ပွဲပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။
ဒုတိယပိုင်း စစချင်းမှာပဲ ဘန်လေအသင်း ညာတောင်ပံက တိုက်စစ်မှူး ဆမ်ဗုဒ် ဆီပေးပို့ခဲ့ရာမှာ အနီးစပ်ဆုံး ရှိခဲ့ပေမယ့် ကွန်ပနီ ကပ်ပြီး ရှင်းထုတ်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
၅၃ မိနစ်အရောက်မှာ ဘန်နာဒိုဆေးလ်ဗား နဲ့ အဂူရိုတို့ အတွဲအဖက်ကနေ ဂိုးစည်း ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ စတာလင်စီ ပေးပို့ခဲ့ရာမှာ စတာလင် အနည်းငယ် တုံ့ဆိုင်း နေခဲ့ပြီး ကန်သွင်းခဲ့ရမှာတော့ အံ့အားသင့်ဖွယ် ဂိုးပေါက်နဲ့ လွဲချော်ခဲ့ပါတယ်။
? #bfcvcity pic.twitter.com/5FiDWulkgS
ပထမဂိုး သွင်းယူခဲ့တဲ့ ဒန်နီလို ဒုတိယပိုင်းမှာလည်း ပထမပိုင်း ကန်သွင်းခဲ့တဲ့ နေရာကနေ ပထမ ကန်သွင်းခဲ့တဲ့ ပုံစံအတိုင်းကန်သွင်းခဲ့ပေမယ့် ဒီတစ်ကြိမ် ကန်သွင်းမှုက အနည်းငယ် အလယ်ကျခဲ့တာကြောင့် ဂိုးသမား နစ်ပုပ် ကာကွယ်ခဲ့ပါတယ်။
မိနစ် ၈၀ ကျော် အရောက်မှာ လော်တွန်ရဲ့ ကွင်းလယ်နားကနေ ဖြတ်တင်ပေးခဲ့တဲ့ ဘောလုံးကို ဂိုမတ်ဆန် အနီးကပ် မြေမကျ ပိတ်သွင်းပြီး အသင်းတွက် ခြေပဂိုးသွင်းယူပေးခဲ့ပြီး တစ်ဂိုးစီ သရေရလဒ်ထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။
မန်စီးတီးအသင်းကော ဘန်လေအသင်းကော လက်ကျန် ၉ မိနစ်လောက်မှာ ရရှိတဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို အသုံးမချနိုင်ခဲ့တာကြောင့် တစ်ဖက် ၁ ဂိုးစီသရေရလဒ်နဲ့ ပွဲပြီးဆုံးခဲ့ပြီး ဘန်လေအသင်းလည်း အဆင့် ၇ နေရာကို တက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
Home Football မန်စီးတီးရဲ့ နိုင်ပွဲကို ရပ်တန့်ခဲ့တဲ့ ဘန်လေ